July 2011 ~ ကိုစောဂျက်
13:48 Ko Saw No comments
30/ July/ 2011
ဒါကတော့ RAM_Saver_Pro_11.4 ပါ။ သူရဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းကတော့ အောက်မှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ keygen ဖိုင့်နဲ့ key number ပါ ထည့်ထားပါတယ်။
links နှစ်ခုကနေ့ တင်ထားပေးပါတယ်။ အဆင်ပြေတဲ့ links ကနေ့ downloads ဆွဲလိုက်ပါ။ 1.MB ကျော်ကျော်ပဲရှိပါတယ်။
downloadsdownloads links1 က ဒီမှာပါ
downloads links2က ဒီမှာပါ
· System Tray monitor
· Desktop RAM monitor
· Desktop CPU Usage monitor
· Specialized Control Panel
· Professional memory monitoring
16:51 Ko Saw No comments
28/ July/ 2011
ဒါကတော့ Error.Repair.Professional.v3.8 ပါ။ ကိုယ်ကွန်ပြုတာမှာ Error တက်မတတ်ကို စစ်ဆေးပေးပြီး ပြန်ပြင်ပေးပါတယ်။ Error Repair က Temporary IE , Temporary Files , Cookies , Advanced Privacy Threats Analysis , Obsolete Software စတဲ့ Error အမျိုးအစားပေါင်း ၂၁ မျိုးကို Repair ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ကွန်ပျူတာ Error များကို Repair, Registry Optimizer နှင့်Backups ကိုပါ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ key numberကို ဖိုင့်ထဲ ထည့်ထားပါတယ်။ ပုံက အနီရောင်နဲ့ ပြထားတဲ့ နေရာမှာ မောက်စ်နဲ့ နှိပ်ပြီး key number ကို ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ တစ်ချို့ကီးတွေက သုံးလိုမရတော့ပါဘူး။ လိုက်ရွေ့ပြီး ထည့်ပါ။ နာမည်ကတော့ ကြိုက်တဲ့ နာမည်ကို ထည့်ပါ။ အလိုရှိသူများ ဒီမှာ downloads ဆွဲလိုက်ပါ။
14:13 Ko Saw No comments
16/ July/ 2011
MP3 တွေကို Editor လုပ်ချင်သူများနဲ့၊ ကိုယ်ပိုင် Mp3လုပ်ချင်သူများ၊ အသံသွင်းချင်သူများအတွက် Mp3-Audio-Editor-7.8.5 ပါ။ အသုံးမပြုတတ်သေးသူများလည်း စမ်းသုံးကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ ဆော်ဝဲယားတွေရဲ့ အသုံးပြုနည်းတွေကို ရေးပေးချင်ပါတယ်။ အချိန်သိပ်မရှိလို့ ဆော်ဝဲယားတွေကြီးပဲ တင်ပေးဖြစ်နေတာပါ။ ပြောချင်တာကတော့ ဆော်ဝဲယားတွေကို သိပ်ပြီး အသုံးမပြုတတ်သေးသူများလည်း စမ်းသုံးကြည်ပါ။ လိုက်ပြီး ကလိကြည်ပါ။ တဖြည်းဖြည်း နားလည်းသဘောပေါက်လာပါလိုက်မယ်။ အလိုရှိသူများ အောက်မှာ ဒေါင်းလောင်းဆွဲလိုက်ပါ။ 14.MB ပဲရှိပါတယ်။
ဒီမှာ downloads ဆွဲလိုက်ပါ
ဒီမှာလည်း downloads ဆွဲလိုရပါတယ်။ links နှစ်ခုပါ
18:06 Ko Saw3comments
15/ July/ 2011
CyberLink_PowerDVD11_Ultra ပါ။ ထွေထွေထူးထူး ပြောစရာလိုမယ် မထင်ပါဘူး။ အားလုံးသိပြီးသားပါ။ key လည်း အထဲမှာ ထည့်ထားပါတယ်။ 85.MB ရှိပါတယ်။ အလိုရှိသူများ ဒီမှာ ဒေါင်းလောင်းဆွဲလိုက်ပါ။
အောက်က နိုင်ငံခြားဆိုဒ်က လင့်မှာ လည်း လိုအပ်ရင် ဖတ်ကြည်ပြီး downloads လုပ်လို့ရပါတယ်။ (၁၊၁၁၊၂၀၁၁)
PowerDVD 11 is the ultimate universal media player that extends your viewing experience beyond just movies on PCs. Play any media format from any device at home or on social networks, at enhanced HD and 3D quality, all with PowerDVD 11.
Play any Media
17:27 Ko Saw No comments
Summitsoft Logo Design Studio 3.5 က ကိုယ်ပိုင် LogoDesign လုပ်တဲ့ Softwares ပါ။ သုံးရတာ မခက်ပါဘူး။ LogoDesign လုပ်ချင်တဲ့ သူများ အတွက်ပါ။ မသုံးဖူးသေတဲ့ သူများလည်း စမ်းသုံးကြည်ပါ။ ဟိုကလိ ဒီကလိ လိုက်လုပ်လိုက် ရင် ခဏလေး ရသွားမှာပါ။ 12.MB ပဲရှိပါတယ်။ Portable ပါပဲ။ အလိုရှိသူများ ဒီမှာ downloads ဆွဲလိုက်ပါ။
ninite ဆိုဒ်မှာ downloads ဆွဲရအောင်
15:23 Ko Saw No comments
ကိုယ်ကွန်ပြုတာ စက်ထဲမှာ လိုအပ်တဲ့ ဆော်လ်ဝဲယားတွေကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေပြီး သွင်းလိုရတဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခုကို ညွန်ပြချင်ပါတယ်။ အဲဒီဆိုဒ် နာမည်က http://ninite.com ပါ။ သူမှာ Web Browsers/ Messaging / Media/ Runtimes/ Imaging / Documents / Security/ File Sharing/ Other / Utilities/ Compression/ Developer Tools ဆိုပြီး အပိုင်း (၁၂) ပိုင်း ခွဲပြီး ပုံတွေနဲ့ တင်ထားပေးပါတယ်။ ကိုယ်လိုအပ်တဲ့ အရာတွေကို အမှတ်ခြတ်ပြီး Get installer ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ကိုယ်သိမ်းချင်တဲ့ နေရာကို ညွှန်ပြပြီး ဒေါင်းလောင့်ဆွဲလိုက်ပါ။ ပြီးရင် Run လိုက်ပါ။ သူဘာသာသူ တစ်ခုချင်းစီကို install သွင်းသွားပေးပါလိုက်မယ်။
Myanmar Typing နဲ့ မြန်မာစာ လက်ကွက် ကျင့်လိုသူများ
1/ 11/ 2011 မြန်မာစာ လက်ကွက်လေ့ကျင့်လိုသူများ အတွက် Myanmar Typing နောက်တစ်မျိုးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ win sittway / Wwin Burmeses / win ...
Free Download Windows7OS များ
5 / 11 / 2011 Windows7လိုချင်တယ် ဆိုလို တင်ပေးလိုက်ပါ။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ OS ဖိုင့်ကို downloads သာ လုပ်လိုက်ပါ.. XP, but look forward eage...
12/June/2011 လူတိုင်းသိပြီးသား Adobe PageMaker 7.0 Software ပါ။ Adobe PageMaker က 7.0 ကနေပြီး မတက်တော့ပါဘူး။ သူအစား Adobe InDesign အဖြစ်...
31/ 10/ 2011 (NEW UPDATE 2/3/3013) ပစ်စပိုစ့် ရုံးက ဘော်ဒါ တစ်ယောက် တောင်းထားလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ 100 years myanmar calendar ပါ။ (1....
Adobe Illustrator CS5 portable အလိုရှိသူများ အတွက်
6/3/2013 Adobe Illustrator CS5 portable ကို အလိုရှိသူများ အတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အင်တာနက်လိုင်းကို သုံးနေတဲ့ သူများ Illustrator CS5 por...
windows7free downloads လုပ်ချင်သူများအတွက်
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ........ ပိုစ်မတင်ဖြစ်တာလဲ ကြာပြီး။ ပြောတဲ့သူတွေလည်း ပြောကုန်ပြီး။ ကိုစောဂျက် ဂန် သွားပြီးလာလို့ ... ပိုစ့်ကတော့ ပ...